သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နိုင်ငံလူဦးရေ အားလုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးရန် ရည်မှန်းထား - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက COVID-19 စစ်ဆေးရန် သလိပ်နမူနာများ ရယူနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို၊ ဇွန် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် အများပြည်သူ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် လုပ်သားအင်အားခွင့်ပြုရန် ဆောင်ရွက်နေပြီး ၂၀၂၂ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ အားလုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကြည်းတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Silva ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသခံမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာတစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီး အနာဂတ်တွင် လုံလောက်သောကာကွယ်ဆေးများရရှိရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဇွန်၈ ရက်က ပြုလုပ်သော သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်တွင် ဧည့်ဟောပြောသူအနေဖြင့် တက်ရောက်စဉ် Silva ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“COVID-19 သည် ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွေ ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ပြန်လည်နိုးထအောင် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်သလို စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထအောင်လည်း မဖြစ်မနေလုပ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် “ Silva က ဆိုသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲရေးစင်တာတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
“ဒါကြောင့် အစိုးရ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလည်ပတ်အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ အရေးပါပုံကို ဘယ်တော့မှလျှော့မတွက်ခဲ့ပါဘူး’’ ဟု ဆိုသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် lockdown အားကြားရှည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် နေ့စဉ်လုပ်အားခရရှိစေမယ့် လုပ်ငန်းများမှ အကြီးစားစက်ရုံများအထိ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို မောင်းနှင်ပေးနေသည့် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတို့တွင် မူလအခြေအနေအတိုင်းလည်ပတ်နိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Silva က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကပ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာမှာ စက်မှုလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ရေး၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အလုပ်သမားများအတွက် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန် အားလုံးသော လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ နဲ့ လိုအပ်သောအထောက်အပံ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အာမံချက်အပြည့်အဝပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်’’ ၎င်းကဆိုသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် ပထမဆုံးပြည်တွင်းကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် COVID-19 တတိယလှိုင်းကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း နှင့် စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ ၂၁၂,၈၃၄ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
COLOMBO, June9(Xinhua) — Sri Lanka is working to vaccinate the entire population against COVID-19 by early 2022, allowing the workforce, economic pillars and general public to run the economy, local media quoted Army Commander Gen. Shavendra Silva as saying.
“It has to be understood that COVID-19 is not merelyahealth issue. Managing the pandemic is essentially managing the economy and livelihood as well. Also, the resilience inapandemic is essentially the resilience in the economy too,” Silva, who also heads the National Operations Center for the Prevention of COVID-19, said.
“Therefore, the government has never underestimated the importance of local and international economic activities to run the country’s economy.”
Silva said that whileacountry like Sri Lanka could not havealockdown foralonger period, the government had preservedaconducive environment for economic activities, from daily wage-earners to large-scale factories, especially the apparel sector that largely contributed to the country’s economy.
“Our pandemic management strategy includes the uninterrupted running of industries, factories, export agencies, and international businesses, where the employees have been assured to work amid the pandemic with all necessary healthcare precautions and associated facilities,” he said.
Sri Lanka is facingathird wave of the COVID-19 outbreak with 212,834 infections reported to date since the first local case was detected in March last year. Enditem